AmaNgqina KaYehova—Yiminyaka Engamashumi Asixhenxe ISikolo SaseGiliyadi Siqhuba
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiArmenia (saseNtshona) IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMam IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOssetia IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTigrinya IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUzbek IsiValencian IsiXhosa IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu
NgoFebruwari 1, 1943, iklasi yokuqala yesikolo esikhethekileyo yaqalisa kumntla weNew York. Eso sikolo, ngoku esaziwa ngokuba siSikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi, siye saqeqesha ngokukhethekileyo amadoda namabhinqa angaphezu kwe-8 000 asuka kuzo zonke iinxalenye zomhlaba.
Ngasentla: Umnyango weSikolo saseGiliyadi, kuMzantsi weLansing, eNew York. Ezantsi: Umhlohli waseGiliyadi efundisa iklasi ye-31 yaseGiliyadi
UJonathan, ophumelele kwiklasi yakutshanje yaseGiliyadi, uthi: “Imfundo esiyifumeneyo esekelwe kwiLizwi likaThixo iza kusinceda sibe lulutho kuyo nayiphi na indawo esithunyelwa ukuba siye kushumayela kuyo.” Unkosikazi wakhe, uMarnie waleka ngelithi: “Ngoku ndinqwenela ukunceda abantu babone ukuba abukho obunye ubomi ngaphandle kobo uMdali anenjongo ngabo. Ndiqinisekile ukuba ukunceda abantu bazi ngoYehova kuza kuphucula ubomi babo.”
Esi sikolo asihlawulisi, ibe siqhutywa iinyanga ezintlanu. Eyona nto ifundwayo yiBhayibhile nokubaluleka komsebenzi wokushumayela. Injongo yesi sikolo kukuba abo bafundiswayo bakhuthaze abantu bakaThixo ukuze babe neempawu ezifunekayo eziza kubenza bakwazi ukumelana neengxaki abajamelana nazo. Ebudeni besikolo abafundi bachitha ixesha eklasini bexubusha imigaqo yeZibhalo ebanceda bomeleze ubuhlobo babo noThixo, uYehova.
Ngasentla: Ngo-1958 uAlbert Schroeder ufundisa esebenzisa umnquba. Ngezantsi: Ngo-1968 u-Ulysses Glass ufundisa iklasi ye-46 yaseGiliyadi
Izibini ezitshatileyo eziba kwesi sikolo sele zingabashumayeli bexesha elizeleyo. Emva kokuba ziphumelele, zinokubuyela kwiindawo ebezikuzo okanye zithunyelwe kwamanye amazwe. Ezinye zisiwa kwenye yeeofisi zamasebe amaNgqina kaYehova ezingaphezu kwe-90. Uninzi lwazo luthunyelwa kwimimandla enabantu abaninzi ukuze zishumayele.
Ukuqala kwaso esi Sikolo sasikwiKingdom Farm, kuMzantsi weLansing, eNew York. Ngo-1961, safuduswa sasiwa kwikomkhulu lamaNgqina kaYehova eBrooklyn, eNew York. Ukususela ngo-1988 ukuya kuthi ga ngo-1995, saba kwiWatchtower Farms, eWallkill, eNew York. Ngo-1995 safuduselwa kwindawo esisaqhutyelwa kuyo nangoku kwiiZiko LeMfundo LeWatchtower, ePatterson, eNew York. NgoMatshi 2013, kwakukho igredi yeklasi ye-134.
Ngasentla: Ngo-2003 abafundi beklasi ye-116 yaseGiliyadi baseklasini. Ngasezantsi: Ngo-2011 abafundi bayafunda kwilayibri yaseGiliyadi.
Kangangeminyaka eyi-70, abaphumelele kwiSikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi bangumzekelo omhle wokushumayela ngoYehova ngokuthembeka.